३ महिनामै रू.३ खर्ब ५० अर्ब व्यापार घाटा - Online majdoor
३ महिनामै रू.३ खर्ब ५० अर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा झन्झन् गहिरिंदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भरिमा रु. ११ खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड बराबरको वस्तु व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा मात्र रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाको अवधिमा कूल वस्तु व्यापार घाटा ४५.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल वस्तु व्यापार घाटा २६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ६.५ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले देशको निर्यात झन्झन् कमजोर हुँदै गएको र आयातको मात्रा बढ्दै गएको देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट कूल रु.२३ अर्ब ७४ करोड बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ । कूल वस्तु आयात भने रु.३ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । कूल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा १६.१ प्रतिशतले बढी हो भने कुल वस्तु आयात ४३.६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा देशको कुल वस्तु निर्यात ८.१ प्रतिशतले र आयात १७.९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।
गन्तव्य मुलुकका आधारमा भारततर्फ २०.२ प्रतिशत, चीनतर्फ १४.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ११.२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पोलिष्टर यार्न, जस्तापाता, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, दन्तमञ्जनलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलंैची, रोजिन, छाला, जि.आई. पाईप, आल्मुनियमलगायतका वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ ।
भन्सार नाकाका आधारमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, कैलाली भन्सार कार्यालय, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट गरिएको निर्यातमा ह्रास आएको छ भने अन्य भन्सार नाकाहरूबाट गरिएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ४०.८ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ४५.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ५०.५ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपूर्जा, एम.एस. बिलेट, सवारी साधन तथा पार्टपूर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपूर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपूर्जा, सिमेन्ट, कच्चा भटमासको तेल, भिडियो टेलिभिजन तथा पार्टपूर्जा, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण तथा औजारलगायतका वस्तुहरूको आयात घटेको छ ।
भन्सार नाकाका आधारमा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट भएको आयातमा ¥हास आएको छ भने अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
बढ्दो वस्तु व्यापार घाटाको असर देशको शोधनान्तर स्थितिमा पर्न थालेको छ । यसको कारण समीक्षा अवधिमा नेपालको शोधनान्तर खाता रु.३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रह्यो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा देशको शोधनान्तर खाता रु.४ अर्ब २७ करोडले बचतमा रहेको थियो ।